Posted by pandora at 11:37 PM
ခုတော့ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ်ရောက်နေကြလဲ အဆင်ရောပြေကြရဲ့လား... သူတို့ရော ငါ့ကို သတိရနေမလား ဘာညာဘာညာ ဆက်ပြီးအတွေးက ရှည်သွားတယ်... တို့တွေ ခုတော့ မိန်းမကြီးတွေ ဖြစ်သွားလေပြီကွယ်....
မိန်းမကြီးလေးယောက် ပြောတာတွေကို ထိုင်နားထောင်သွားတယ်
အဲ အတော်တော့ ကြာသဗျ :D
လေးယောက်မှသည် သုံးပွင့်...တပွင့်ကတော့ ကဗျာကို ရေးနေ၏။
မပန်..မိန်းမကြီးတွေ မဖြစ်လောက်သေးပါဘူးနော်.. မိန်းမလတ်လောက်ပဲနေမှာပါ.. မိန်းမကြီးတွေဆို သားရေးသမီးရေး အကြောင်းတွေပြောနေမှာပေါ့..:P
မပန်ရေးသလို သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းရေးချင်လာပြီ။
ဖတ်သွားသည်။ ခေါင်းများအုံနေ၍ ..ဘာမှ မဆု့းဖြတ်နိုင်သး.
လွတ်လပ်စွာ တွေ့ဆုံနိုင်သေးတဲ့၊ အရင်က အကြောင်းတွေကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စားမြုံ့ပြန်နိုင်သေးတဲ့ လေးယောက်ကို အားကျရင်း ပြုံးသွားပါတယ်။ သောကြာညနေဟာ ရက်သတ္တပတ်ကုန်ဆိုတော့ စိတ်မောလူမောနဲ့မို့ “မိန်းမကြီး”လို ခံစားရတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ခါကျရင် စနေမှာ ဆုံပြီး တစ်နေကုန် လျှောက်လည်ပစ်လိုက်ပါ။ ပျော်ရွှင်ပါစေ။
သိပ်မကြာတော့ခင် မိန်းမကြီး ဖြစ်လာမယ့်သူ... မိန်းမကြီး၎ယောက် စကားလက်ဆုံ ကျနေတာကို အဆုံးထိ နားထောင် သွားပါတယ်။
မပန်က အစိမ်းနဲ့ တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်မယ်၊ ဟုတ်တယ်ဟုတ်။ သိနေတယ်နော်၊
ချစ်ချစ်(ကွန်မန့်ပေးသူ၏ နံမည် ဖြစ်ပါသည်)
တပတ်တခါလောက် အဲဒီလို တွေ့ပါ။ တကယ်နုပျိုလာမှာ။
ဖတ်လို့ ကောင်းကြောင်းပါ။ Esplanade ဖက်တောင် မလျှောက်ဖြစ်တာ ကြာပြီဆိုတာ သတိရသွားတယ်။
ညတပိုင်းဟာ တိတိရိရိ ပြတ်ကျသွားပေါ့။
မြို့ပြည နောက်ခံ ရှုခင်း ခပ်ပါးပါးကို အမျိုးသမီးလေးယောက်ရဲ့ နောက်ခံဘ၀ ခပ်ဝါးဝါးနဲ့ ယက်ဖောက် ခြယ်မှုန်းထားပြီး ...
အ၀ါမလေးရဲ့ တရေးနိုး ဟိုက္ကူကဗျာနဲ့ အဆုံးသတ်ထားတာလေး ... လှတယ် ပန်ပန် ... ။
ခရေဆိုတာ အများကြီး ကြွေတာ ဘာလို့ ၃ပွင့်တည်းလဲ.. :) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. အသက်တွေ ကြီးရင့်သွားတဲ့အခါ... တယောက်တည်းပဲဖြစ်ဖြစ်.. နှစ်ယောက်တွဲပဲဖြစ်ဖြစ်.. တအုပ်စုဖြစ်ဖြစ်.. ရင်ဆိုင်ရတာတွေကတော့ သိပ်မကွာဘူးထင်တာပဲ..။
ဒီလိုပဲ ငါတို့ဟိုရောက်ရင် အတူနေကြမယ်ကွာဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထွက်ခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေ ခုတော့ တယောက်တနေရာ... သတိတော့ရသား။ တယောက်အားရင် တယောက်မအားနဲ့ အားလုံးပြန်ဆုံဖို့ကခက်သား...။ :D
မပန်က ဖြူ၊ဝါ။ နီ၊ စိမ်း.. ဘယ်သူလဲ....
အစိမ်းရောင် မိန်းမကြီး ရေ- ( မိန်းမလေးပဲ လုပ်ပါကွယ်)
စလုံး မြစ်ကမ်းက..အနံ့တွေ အသံတွေ.. ရလာတယ်။
သောကြာနေ့ရဲ့ ဘောင်းဘီ တ၀က်တွေ ကိုလည်း မြင်ယောင်လာတယ်။ သောကြာနေ့မှာ ဘောင်းဘီ တ၀က်မှ မ၀တ်နိုင်ရင်..ကော်လံပြာ လို့ ထင်ခံရမှာ ကြောက်လို့..တကျွန်းလုံး..ဘောင်းဘီ တွေကို ၀က်လိုက်ကြတာ..း)
OK.. beagood gal. ( Big Gal)
မိန်းမကြီးလား အန်တီကြီးတွေလားကွယ်.. ခွိခွိ
ပို့စ်လေးက ကောင်းလိုက်တာ သူငယ်ချင်းလေးယောက် ပြောနေတဲ့ စကားတွေမှာ ငယ်မူငယ်သွေးလေးတွေနဲ့ ပျော်စရာ ကျနော်လည်း သူငယ်ချင်းတွေကို သတိရသွားတယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ၅ လလောက်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့ သူလည်း အလုပ်ဝင်နေ အလုပ်မှာ လူကြီးလိုနေရတဲ့ အကြောင်းတွေပြောဖြစ်ကြတယ် တခဏတော့ မေ့ပြီး ကျောင်းကအကြောင်းတွေပြန်ပြော ရယ်စရာတွေနဲ့ လွတ်၂လပ်၂ အော်ရယ်လိုက်မိတာ သူပြောတဲ့စကားက “ဒီလိုမျိုးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်တွေ ပြန်လိုချင်မိတယ် ” တဲ့ ။ ကျနော်တို့တွေပြန်ဆုံဖို့ခဲယဉ်သေးတယ်း)
ဘာလို့ များ ဒီလောက် ကြီးချင်နေရတာလဲ မပန်ရယ်
ပို့စ်လေး က ချစ်စရာ ကောင်း နေသေး..
တယောက် က စွံတော့မဲ့ နမိတ်ပေးတာလား
အဲဒါ မပန်များလား...း)
အစ်မပန်ရေ ပေါ်မလာတာလည်းကြာပေါ့ :)
အကြောင်းလေး ခရေပန်းနံ့တွေပါ ခေါ်ဆောင်လာတယ်
ကောင်းသောနေ့ပါ အစ်မပန်ရေ အားပေးနေပါတယ်
အနီလေးနဲ့ အစိမ်းလေးကို သိသလိုပဲ…
ဖြူစိမ်းနီဝါ တို့ ရဲ့ လွတ်လပ်ပေါ့ပါး အနှောင်အဖွဲ့ ကင်းတဲ့ တွေ့ ဆုံမှုလေးက အားကျစရာ…
ကြည့်ရတာ အဖော်ရှိတဲ့ နှစ်ယောက် နောက်ဆံမတင်းပုံထောက်ရင် အိမ်ဆွဲလည်းလေးတွေ မရှိသေးလို့ ပဲ ဖြစ်ရမယ်…
မြို့ ပြရဲ့ ခရေရနံ့ လေးရသွားအောင် ဆွဲခေါ်သွားနိုင်တဲ့ ပို့ စ်လေးပါ…
ပို့ စ်ခေါင်းစဉ်လေးတွေ့ ကတည်းက စိတ်ဝင်စားသွားတာ…
စွယ်တော်လေး၎ပွင့်ကို သတိရသွားမိလို့ … ကြွေသွားတဲ့တပွင့်ကို လွမ်းလွန်းလို့အဲဒီအကြောင်းရေးဖို့ ဆို အားအင်တွေ ချိနဲ့ နေတာ… ဒီပို့ စ်လေးတွေ့ တော့ ရေးဖို့ အင်အားတွေ ရှိသွားသလိုပဲ…
ရေးထားတာလေး.. တွေးထားတာလေးကို အလွန်နှစ်သက်ပါတယ်...။
ဒါပေမယ့် မိန်းမကြီး ဆိုတဲ့စကားလုံးကို ခေါင်းစဉ်အဖြစ် တွေ့လိုက်ရတော့ အင်း.. ကိုယ်တွေလဲ မိန်းမကြီး အရွယ်တွေ ဖြစ်နေပါပေါ့လားလို့ တွေးလိုက်မိပြီး နဲနဲတော့ ကြောက်သွားတာပေါ့...
နောက်တခုက ဒီပိုစ့်ထဲက သူတို့လေးယောက်ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရောင်လေးရောင်နဲ့ ခြယ်ထားတဲ့ ပန်ပန့်ရဲ့ လက်ရာ ပန်းချီလေးနဲ့ တွေ့ရရင် ပိုများ ပြည့်စုံလေမလား လို့လဲ တွေးနေမိတယ်...
နောက်ဆုံး အဖေါ်ရှာတာ နဲ့
စူးစူးရှရှကို ခံစားရပါတယ် .... မြို့ပြရဲ့မွန်းကျပ်မှုကို ...။
ကျွန်တော် ဂျွန်စတိန်းဘတ်ရဲ့ ဒေါသမာန် ထဲက
ကျွန်တော်တို့ပန်းသီးဆွတ်ဖို့ လာခဲ့ကြတာပါ... တွင်းတူးသမားတွေမဟုတ်ပါဘူး...။
လူကြိုက်များခြင်းရယ် ကိုယ်နဲ့ ဓာတုဓာတ်ပြုနိုင်သူကို တွေ့ဆုံခြင်းရယ် ဆိုတာ တိုက်ရိုက်ထပ်တူကျလို့မရတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေတွေပဲ။
အရေးသား က သွက်တယ်
တကယ့် အဖြစ်အပျက် (လို့ထင်တယ်) ပေမယ့်
ဘတ်ရတာ ဝတ္ထု တိုလိုပဲ
desperate housewives နဲ့ sex and the city ကြည့်တာများနေလို့
သူငယ်ချင်း လေးယောက်တွေ အကြောင်းခဏခဏ တွေးဖြစ်တယ်
နောက်ဆုံးကျတော့ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ်
သူငယ်ချင်း သံယောဇဉ်က သာ အခံဆုံးပါ
ချစ်သူတွေ ဆိုတာ ခဏတာပါပဲ
တချို့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ဆို မိသားစု ထက်ပိုခင်တွယ်မိတယ်